Soratra Mipetaka Amin’ny Blaogin’i Zelalem Kiberet: ‘Avelao Hikorintsana ny Fahafahana’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2015 8:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Deutsch, Español, Swahili, বাংলা, English
Zelalem Kiberet tamin'ny 25. Sary avy amin'ny bilaogin'i Zelalem.
Tamin'ny Avrily 2014, blaogera sy mpanao gazety sivy no nosamborina tao Ethiopia. Maro amin'ireo lehilahy sy vehivavy ireo no niasa niaraka tamin'ny Zone9, blaogy iraisana iray izay nitati-baovao ara-politika sy sosialy tao Ethiopia ary nampiroborobo ny ny zon'olombelona sy ny fangaraharahan'ny asan'ny governemanta. Ary ny efatra amin'izy ireo dia mpanoratra tato amin'ny Global Voices. Tamin'ny Jolay 2014 dia nampangaina ho nanitsakitsaka ny Fanambarana miady amin'ny Fampihorohoroana ry zareo. Tao an-tranomaizina hatrany ry zareo hatramin'izay fotoana izay, nahemotra hatrany ny fotoam-pitsarana azy ireo.
Ity no fahatelo amin'ny andian-dahatsoratra nataonay – “Manana Anarana Izy Ireo” – izay mikaroka ny hanasongadinana ireo bilaogera tsirairay any am-ponja amin'izao fotoana izao. Fanirianay ny hanome ny hasina maha-olombelona azy ireo, hitantara ny fiainana manokana sy ara-bolan'izy ireo. Ity tantara ity dia avy amin'i Endalk Chala, mpikambana mpanorina ny firaisankinan'i Zone9 izay tsy azon'ny fisamborana noho ny maha-any Etazonia azy mianatra hahazoana ny PhD.
Nihaona tamin'i Zelalem Kiberet aho tamin'ny 2012. Te-hihaona taminy aho rehefa nahita ny blaoginy, izay misy aingam-panahy mahavariana momba ny haisoratra, ny zavakanto, politika, tantara ary filozofia ny lahatsoratra navoakany.
Ho ahy, tsapako ho misy fifandraisana akaiky tsy misy toy izany ny namakiako ny lahatsorany momba ny filozofia sy ny nikarajiako tsindraindray taminy tao amin'ny Facebook, ka nanapa-kevitra aho ny hihaona aminy mivantana mihitsy. Tamin'izany fotoana izany aho te-hihaona mafy amin'ireo namako an-tserasera. Izay angamba no nahatonga anay hanangana ny Zone9. Tamin'izany fotoana izany i Befeqadu no hery mpanetsika ny firaisan-kina, nanomana ny fihaonanay. Nihaona tao amin'ny café iray antsoina hoe Pizza izahay, tao afovoan-tanànan'i Addis Ababa.
Befeqadu sy izaho no tonga voalohany dia nanampy anay i Zelalem avy eo. Nandray anay tamin-kafanampo izy. Nipetraka teo amin'ny latabatra nanakaiky ny varavarambe izahay. Nikomandy iray veran'ny macchiato izy ary dia nanana ny resaka anisan'ny nahafinaritra indrindra izahay.
Mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Sekolin'ny Lalàna tao amin'ny Oniversiten'i Addis Ababa i Zelalem, ary nianatra lalàna ihany koa tao amin'ny Oniversiten'i Ambo. Mihevi-tena ho tsara vintana mihitsy aho niara-niasa tamin'i Zelalem. Noho ny halalin-tsainy, lahatsoratra mampihomehy sy ny tsy fanaikinaikeny lembenana tamin'ny famakafakana ara-pivavahana dia namboarin'ny namany ny anaran'i Zelalem hitovy amin'ny anaran'i Zola, ilay frantsay, izay mampazoto an'i Zelalem ihany koa ny mamaky azy. Mivandravandra tokoa ny fitiavan'i Zola-nay ny filozofia sy ny zavakanto ka nataony ho fanevan'ny blaoginy ny hosodoko malazan'i Jacques-Louis David mitondra ny lohateny hoe “Ny Fahafatesan'i Socrates”.
Ny Fahafatesan'i Socrates, nataon'i Jacques-Louis David. Navoaka ho azon'ny rehetra ampiasaina. Sary tao amin'ny Wikimedia.
Marevaka tokoa eo amin'ny mpiara-mitafa aminy ny siokan'i Zola ka sahiko ny milaza fa tamin'ny fotoana nisamborana azy dia lasa be mpamaky indrindra eo amin'ny Ethiopiana ao amin'ny Twitter i Zola. Ny sioka mampihomehy sy lalintsaina no nametraka azy ho mpahay haisoratra mila jerena.
Afaka manoratra tantara lavalava mampihetsi-po ihany koa i Zola. Ao amin'ny iray amin'ny lahatsorany dia esoesoiny ny olona fototra izay tsy ho sahin'ny gazety be mpamaky ao Ethiopia velively ny hankatoa izany. Ao amin'ny lahatsoratra blaogy iray mitondra ny lohateny hoe “Ahoana ny hanangananao fivavahana ho anao manokana? – Taridalana Ethiopiana iray”, no nanoratany lahatsora-panesoana lava amin'ny fanaovan'ny fampielezam-peo sy sary fandaharana maro iezahana hanandratana fivavahana aman'olona, dia ny filoha teo aloha farany teo Meles Zenawi. Ireny karazan-tsoratra ireny no mahatonga an'i Zola ho tafiditra anaty fanaraha-mason'ny governemanta Ethiopiana. Androany, rehefanigadra herintaona, dia miatrika fiampangam-pampihorohoroana noho ny maha-manampahaizana azy izy, ary iray amin'ireo mampiasa ny hanihany amin'ny fanaovany tsikera.
Eo amin'ny fanovan'ny blaoginy, dia nanoratra i Zola hoe ‘Avelao Hikorintsana ny Fahafahana’. Ka raha mbola any am-ponja izy dia tsy maintsy mitondra izany firariana izany ho azy izahay.